Mayelana NATHI - Shanghai Comi Aroma Co., Ltd.
I-COMI AROMA yinkampani yokuphakela eyasungulwa eShanghai, eChina ngo-2010. Indlunkulu eShanghai, eFektri eXuzhou, eChina. Kusukela kwaqala, saziwa kakhulu ngemikhiqizo ye-High Flint Glass, kepha namhlanje, ngokufinyelela kumathanga angaphezu kwama-25, singakwazi ukufaka ama-oda azo zonke izinhlobo, osayizi, nemibala kumavolumu amakhulu unyaka wonke. Lokhu kusenza sikwazi ukukhonza izimboni eziningi ezahlukahlukene kubandakanya okokuhlobisa, okokuhambisa, amakha, ithubhu yengilazi, kanye nebhodlela elenza imithi, kanye nethotho. Siqinisekisa ukuthi zombili izinto zesiko lethu nezitoko zethu zenziwa zibe sezingeni eliphakeme kakhulu futhi zitholakala njalo e-Amber, Green, Flint, naseCobalt Blue.
Ngokukhethekile, i-COMI AROMA ihlinzeka ngamabhodlela engilazi, iziqukathi, nezinsiza ezigcwele zokusetha (ama-dropper caps, amaphampu enkungu, amaphampu wokufafaza, izinduku ze-fiber ezinomsoco, izinti ze-rattan, izitobha namakepisi). Ngolwazi olucishe lube ngamashumi eminyaka embonini yokupakisha, sinikela ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme futhi emisha yokupakisha yobuhle bomhlaba wonke nemikhiqizo yesikhumba.
Zonke izakhiwo zethu zobuchwepheshe bokwenza izinto, zihambisana namazinga ase-US futhi ziqinisekiswe yi-US FDA ngakho siyakwazi ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende asekhaya nawamanye amazwe. Ngaphezu kwalokho, i-COMI AROMA isebenzise ubuchwepheshe obushisayo bokumboza umusi obushisayo, ubuchwepheshe bokupenda obubandayo bokugcina, nobuchwepheshe bezokwelapha obuthuthukisiwe be-silicon. Indawo yethu yokugcina izinyawo eyisikwele eyi-100,000 + lapho sigcina khona amayunithi angaphezu kwezigidi ezingama-50 womkhiqizo ukuqinisekisa ukwaneliseka kwamakhasimende ngokushesha nokugcina izikhathi ezimfushane zokuhola.